ULUVO: NGABA UTRAVIS SCOTT UNETYALA NGEASTROWORLD? - IBALI LEGIZMO - UMNTU ODUMILEYO
Izinto Ezikhethekileyo Ze-Gs
Xa yonke indawo iguqulwa ibe ngumgodi we-mosh, oku kwaziwa ngokuba yindawo yokuhlala yomthendeleko. NguDarwin wonke umntu-ngokwakhe, yiya-eyakho-yomngcipheko
Xa yonke indawo iguqulwa ibe ngumgodi we-mosh, oku kwaziwa ngokuba yindawo yokuhlala yomthendeleko. Yinto kaDarwin wonke umntu-ngokwakhe, hamba-kweyakho-yeyakho-ingozi yomcimbi ngaphandle kwezihlalo ezinikezelweyo. Iphupha elibi, ukungxama okwenzeke e-NRG Park ngoNovemba 5 eTravis Scott's hip-hop Astroworld bekulindelekile, ngakumbi kuba igcisa likhuthaza ukudumba kwezihlwele njengenxalenye yomsebenzi wakhe. Nangona kunjalo, maninzi amahla ndinyuka aqhubekayo kubomi bukaTravis Scott. Ngaphaya koko, ebekwi-trend kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo.
Zithini iindaba zamva nje?
Omnye wabantu ababhubhileyo kule ngozi uthi, ndikhulele eBay Area kwaye bendimane ndisiya kwiColiseum for Days on the Green. Kodwa akuzange kube kudala ndikwishumi elivisayo eHouston endathi ndaqalisa ukuya kwiikonsathi zerock ngokunyanisekileyo. Ndithathe unyaka kwikholeji ukuya emsebenzini njengo-DJ wobusuku bonke kwisikhululo samatye esikhulu sedolophu. Xa ndabona umthendeleko uhleli kwitikiti, ndazi ukuba kwakungaphezulu kwenqaku lokulumkisa; yayisisimemo sentlekele.
Xa yonke indawo iguqulwa ibe ngumgodi we-mosh, oku kwaziwa ngokuba yindawo yokuhlala yomthendeleko. Yinto kaDarwin wonke umntu-ngokwakhe, hamba-kweyakho-yeyakho-ingozi yomcimbi ngaphandle kwezihlalo ezinikezelweyo. Iphupha elibi, ukungxama okwenzeke e-NRG Park ngoNovemba 5 eTravis Scott's hip-hop Astroworld bekulindelekile, ngakumbi kuba igcisa likhuthaza ukudumba kwezihlwele njengenxalenye yomsebenzi wakhe.
Ewe, abeendaba bazama ukukhangela ixesha lewaranti yesi siganeko. Nangona kunjalo, ngenxa yokunqongophala kwemimiselo kunye neemeko, bajongene nobunzima obuninzi bokunqoba. Ngaphandle koko, urhulumente uzama ukunika ithemba kwiintsapho.
Ewe, urhulumente uzama ngandlela zonke ukunika ithemba kumalungu osapho achaphazelekayo. Ngaphezu koko, kulindeleke ukuba kungekudala urhulumente abanike imali ethile.
U-Katy Perry usisiqhulo somntwana wakhe nge 'Pun', uSiliphu wooWes kunye noWows
Ukusongelwa konke ukujonga kwiLucifer yeXesha lesi-5's ABAQHELEKILEYO abanokuqhubeka okanye badlule
'Isithsaba' sexesha lesithandathu lijikeleza ixesha lesihlanu kodwa ngokweenkcukacha
Joker 2 Amathuba, anomdla [IPLOTI], ikamva, villain entsha, kunye nohlaziyo lwamva nje omele uyazi
Njengeefilimu zeBachelorette ezidumileyo, uClare Crawley uza kuvalwa yedwa ngamadoda angama-42
Umama kaBritney Spears ufika enkundleni nge #FreeBritney Movement Kunye namaphepha asemthethweni
Rebelde Cast: Ubukhe wababona phi ngaphambili?
Umhla wokuKhutshwa koMoya kaTsushima, umdlalo weDlalo, iAngle yeKhamera, ibali lebali kunye nokunye okuninzi
Indawo yokuPhuhla iBooth 2 Umhla wokuKhutshwa, Ngubani kwiCast? Iploti, iTrailer kunye nendlela yokuphela kwexesha lonyaka elidlulileyo [Ecacisiwe]
Abagcini beGalaxy 3 yeNetflix ityhile uMhla weZinto omele wazi ngaphambi kokuba ubukele iziQwenga ezitsha zeziphi izinto ezinqunyulwe iintloko zasezulwini?
UJames Cameron uthathela ingqalelo i-Avatar 2 ukuba ibe yeyona bhanya-ePhakamileyo- [Grossing] kwakhona emva kokuba yathathwa yiAvengers Endgame
Ixesha le-Atypical 4- Ukukhutshwa kweNetflix, iCast kunye nePloti, uLindelo onokuthi uluphose kunye nohlaziyo oluninzi
UCaptain Marvel 2 wamva nje [UHLAZIYO], Iithiyori, ubuGcisa, isiQendu, iiTrailer, Sinazo zonke iinkcukacha eziNye kuWe
UTor 4 Uthando kunye neNdudumo yoMhla woMoya, isiCwangciso, isiQendu, iTreyila kunye Yintoni esinokuyilindela kwikamva?
betha iziqendu zomntu wosapho
I-riverdale iza nini kwi-netflix
liphuma nini ixesha lokutshintsha 2
Ixesha le-peaky blinders 6 umhla wokukhutshwa kwe-Netflix
izilwanyana ezithandekayo zikhupha umhla
Igreek god movie 2016